Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 9
Nisy namako iray avy any Etazonia Afovoany nanontany hoe: Ratsy ve ny mampiasa saina fa tsy fitaovana ara-batana hanasitranana aretina ara-batana?
Ny fanontaniana dia mirakotra sehatra iray lehibe mba hamaliana ny valiny hoe "eny" na "tsia". Misy ny tranga iray izay hamarinina ny olona iray amin'ny fampiasana ny herin'ny eritreritra handresena ny aretina ara-batana, amin'izay dia hitenenantsika fa tsy diso izany. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy mety ny mampiasa saina fa tsy fomba ara-batana hanasitranana ny aretina ara-batana. Ahoana ary no hanapahantsika hevitra izay fotoana mety sy ratsy? Izany dia tsy hita afa-tsy arakaraka ny fotokevitra tafiditra. Raha mahatoky ny fitsipiky isika fa ny fomba ampiasana dia mifanaraka amin'izany ary noho izany dia tsara. Ka ny valin'ny fanontaniana dia azo valiana amin'ny ankapobeny ary tsy amin'ny tranga iray manokana, fa raha ny fitsipika dia tsapa fa afaka mampihatra izany amin'ny raharaha manokana ny tsirairay ary mamaritra raha marina na diso ny fanasitranana ny aretina ara-batana. fizahana ara-tsaina. Andeha hojerentsika io fitsipika io: Misy zava-misy marina ve, sa misy hadisoana fotsiny? Raha zava-doza ny aretina ara-batana dia tokony ho vokatry ny antony izany. Raha ny aretina antsoina hoe aretina dia fahatafintohinana fa tsy aretina ara-batana fotsiny dia fanodikodinana. Raha ny mamitaka no voalaza fa aretina ao an-tsaina ary ny aretina dia misy ao an-tsaina fa tsy ao amin'ny vatana vatana fa ny delestazy dia tsy aretin-tsaina, izany dia adala. Saingy tsy afaka miatrika hadalana isika ankehitriny; miahiahy momba ny aretina ara-batana isika. Avelao amin'izany fa ny aretina azo avy amin'ny vatana dia zava-misy, hoy isika fa misy fiantraikany ireo zava-misy ireo. Ny dingana manaraka dia ny fitadiavana ireo anton-javatra ireo. Raha afaka mahita ny anton'ny aretina ara-batana isika dia afaka manasitrana ny aretina ara-batana amin'ny fanesorana ny antony misy azy ary manampy ny natiora hanamboarana ny simba. Ny aretina ara-batana dia mety ho vokatry ny antony ara-batana na noho ny antony ara-tsaina. Ny aretina ara-batana izay ateraky ny fomba ara-batana dia tokony hositranina amin'ny fomba ara-batana. Ny aretina ara-batana izay misy antony miteraka, dia tokony ho esorina ny aretin-tsaina ary avy eo dia avela handinika indray ny firindrana ara-batana. Raha marina ny voalaza etsy aloha, afaka milaza isika fa ny aretina ara-batana izay manana antony ara-batana dia tsy tokony hokarakaraina ara-tsaina, ary ny aretina ara-batana vokatry ny fisainana ara-tsaina dia tokony ho noho ny antony nesorina ary ny toetra dia hanamboatra ny aretina ara-batana. Ny fahasahiranana manaraka hoentina hahitana ny lalantsika dia ny manapa-kevitra hoe inona ny aretina ara-batana, ary ny aretina ara-batana. Ny voatra, ny ratra, ny taolana tapaka, ny sprains ary ny toy izany dia nateraky ny fifandraisana mivantana amin'ny zavatra ara-batana ary tokony hahazo fitsaboana ara-batana. Ny aretina toy ny fanjifana, diabeta, gout, lokomotor ataxia, pnemonia, dyspepsia ary Brights 'dia vokatry ny sakafo tsy mety sy tsy miraharaha ny vatana. Ireo dia tokony hositranina amin'ny alàlan'ny fikarakarana tsara ny vatana sy amin'ny famatsiana sakafo mahasoa, izay manaisotra ny antony manintona ny aretina ara-batana ary hanomezana endrika ny famerenana ny vatana amin'ny toe-pahasalamany. Ny aretina ara-batana izay vokatry ny antony ara-tsaina, toy ny fahatahorana, ary ny aretina vokatry ny fampiasana narkotika, ny zava-mahadomelina ary ny alikaola, ary ny aretina vokatry ny eritreritra sy fihetsika maloto, dia tokony hositrana amin'ny fanesorana ny antony mahatonga ny aretina. ary manampy ny natiora hamerenana amin'ny laoniny ny lanjan'ny vatana amin'ny sakafo mahasoa, rano madio, rivotra madio sy tara-pahazavana.
Mety ve ny manandrana manasitrana aretina ara-batana amin'ny fitsaboana ara-tsaina?
Tsia! Tsy mety ny manandrana manasitrana ny aretina ara-batana amin'ny alàlan'ny "fitsaboana aretin-tsaina", satria ny olona iray dia hiteraka fahavoazana maharitra kokoa noho ny tsara. Fa ny iray dia manan-jo hanandrana mikorontana ny tenany sy ny ezaka atao dia mety hihaona amin'ny valiny mahasoa raha tsy manandrana manao ny tenany izy fa tsy marary.
Raha mety ny manasitrana ny aretina ara-tsaina amin'ny fisainana ara-tsaina, manome ny aretina ara-batana dia manana fiantraikany ara-tsaina, nahoana no diso amin'ny mpahay siansa ara-tsaina na kristiana ny manasitrana ireo aretina ireo amin'ny fitsaboana ara-tsaina?
Diso izany satria tsy mahalala ny saina na ny lalàna mitondra sy mifehy ny hetsiky ny saina ny mpahay siansa kristiana sy ny saina; satria amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny mpahay siansa ara-tsaina, tsy mahalala ny antony ara-tsaina amin'ny aretina ara-batana, ary matetika mandà ny fisian'ilay marary, dia manandrana miteraka fanasitranana amin'ny alàlan'ny baiko avo ny sain'ny marary azy na amin'ny fanolorana ny sain'ny saina. manam-paharetana fa ambony noho ny marary izy ireo fa tsy fahita firy fotsiny ny aretina; noho izany, tsy fantany ny antony na ny fiantraikany tsara ao an-tsain'ny olona marary amin'ny fifandraisany amin'ny marary, indrindra raha tsy tsinontsinoavina ilay fiheverana na heverina ho fanina, dia tsy voamarina eo amin'ny fitsaboana izy. Ary koa, raha mety ny antony manosika azy amin'ny fikandrana fitsaboana marary iray ary hita fa mahasoa ny valiny, dia mety ho ratsy ny fitsaboana toa izany raha nanaiky ny mpahay siansa ara-tsaina ny vola na nangataka vola tamin'ny fitsaboana.
Nahoana no diso ny mpahay siansa manam-pahaizana handray vola amin'ny fitsaboana aretina ara-batana na ara-tsaina raha toa kosa ny dokotera mitaky ny saram-pitsaboana tsy tapaka?
Tsara kokoa raha nandoa na nikojakoja dokotera ho an'ny vahoaka ny Fanjakana, fa satria tsy izany dia rariny loatra ny dokotera mangataka sara; satria, voalohany, tsy mody herin'ny asan'ny maizina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny saina izy, nefa fantany fa zava-misy ny aretina ara-batana, ary entiny amin'ny fomba ara-batana izy ireo, ary ny fitsaboana azy ireo amin'ny fomba ara-batana dia manana zony tambiny ara-batana izy. Tsy dia toy izany ny tranga ara-tsaina sy ara-tsiansa hafa, satria milaza izy fa manasitrana amin'ny alàlan'ny saina, ary ny vola dia tsy tokony hanahirana ny saina amin'ny fanasitranana aretina, satria ampiasaina ny vola ary ampiharina amin'ny tanjona ara-batana. . Raha antsoina hoe delestazy ny marary ara-batana, dia tsy hanana zo haka vola ara-batana ho an'ny fitsaboana izay tsy nisy izy; fa raha nanaiky ny aretina ara-batana izy ary nanasitrana izany tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny saina dia mbola tsy nanan-jo handray vola izy satria ny tombony azo dia tokony ho karazany avy amin'ny tombony azo, ary ny tombony azo avy amin'ny saina dia ny karama ihany no tokony ho fahafaham-po amin'ny fahafantarana fa nomena izany tombony izany. Ny tombony azo dia tokony horaisina amin'ny fiaramanidina iray ihany izay manome tombony ary ny mifamadika amin'izany.
Nahoana no tsy mety amin'ny mpahay siansa ara-tsaina ny mahazo vola amin'ny fitsaboana aretina rehefa manokana ny fotoanany rehetra izy ary tsy maintsy manana vola hiainana?
Satria ny olona mahazo vola dia tsy afaka mamerina ny fahasalamana tonga lafatra amin'ny olona marary ara-tsaina kanefa ny sain'ny marary saina dia voaloto amin'ny fisainan'ny vola. Ny olona iray dia tsy hampiasa lehilahy maloto, mikorontana sy maloto ary hampianatra sy hanatsarana ny fitondran-tenany na ny zanany; ary tsy misy olona tokony hampiasa siantifika ara-tsaina na kristiana hanasitranana azy na ho namana ihany koa raha ny sain'ny "siantifika" dia voan'ny aretina sy tratry ny mikraoba vola. Tena tsara ny milaza fa manasitrana ny fitiavana fanasitranana sy mahasoa ny mpiara-belona ny mpanasitrana ara-tsaina. Raha marina izany ary tsy tafiditra ao an-tsainy ny fanontaniana momba ny vola, dia hikomy amin'ny eritreritra hanaiky vola izy; satria ny fisainana vola sy ny fifankatiavan'ny namana dia tsy eo amin'ilay fiaramanidina iray ihany ary somary tsy mitovy amin'ny toetrany. Noho izany, rehefa omena vola ny vola azo avy amin'ny tombontsoa voaray, dia handà izany ilay mpitsabo raha tsy manasitrana amin'ny namany fotsiny izy. Ity no tena fitsapana fanasitranana. Fa manontaniana kosa ny fomba ahoana no handotoany ny fotoanany rehetra amin'ny asany ka hiaina nefa tsy mahazo vola? Tsotra ny valiny: Ny voajanahary dia hanome izay rehetra tena tia azy sy manolo-tena hanolotra ny fiainany hanampy azy amin'ny asany, fa ny fitsapana maro kosa alohan'ny ekena sy omena azy. Iray amin'ireo fepetra takian'ny fangatahan'ny minisitra sy ny mpitsabo azy ny hoe tokony hanana saina madio izy, na raha tsy afaka ny fahazoan-tena ho an'ny tenany ny sainy. Ny fiheverana fa ny mpanasitrana dia manana sitrapo voajanahary ho an'ny olombelona ary maniry ny hanampy amin'ny fanasitranana ara-tsaina. Raha manana fahaizana voajanahary izy ary mifanena amin'ny fahombiazana rehetra, ny marary dia maniry ny haneho ny fankasitrahany ary hanome vola azy, na dia tsy nitaky aza izy. Raha mitaky izany izy na manaiky an'izany avy hatrany dia manaporofo fa tsy izy no safidin'ny natiora; raha mandà izy amin'ny voalohany dia manandrana azy indray, ary mahita fa sahirana ny vola, ary rehefa terena haka azy io dia matetika no manery azy hanao izany; ary ny fanekena ny vola na dia mety ho tsara aza ny fikasany, dia ny fomba voalohany hampiasana ny sainy amin'ny mikrôm-bola - izay voaporofo fa nisy an'ireo mpanasitrana mahomby indrindra. Ny mikraoba vola dia mitarika ny sainy, ary mitombo ny aretim-bola miaraka amin'ny fahombiazany, ary na dia toa mampiseho ny mahasoa ireo marary azy aza izy amin'ny ampahany iray amin'ny toetrany dia hanimba azy ireo amin'ny ampahany hafa izy, na dia tsy nahatsiaro tena aza izy dia nanjary naloto fitondran-tena. marary ara-tsaina ary tsy vitany ny tsy hamindra ny marary amin'ny aretiny. Mety ho ela be, fa ny mikraoba ateraky ny aretiny kosa dia hiorim-paka ao an-tsain'ireo marary azy, ary hihanaka ny aretina eo amin'ny ilany malemy indrindra amin'ny toetrany. Ka tsy mety raha misy mahasitrana maharitra hahazoana vola, satria tsy mahavita manasitrana mandrakizay izy raha mahazo vola, na izany aza no hita mipoitra eo amin'ny sehatry ny zavatra. Amin'ny lafiny iray, raha ny faniriany fotsiny dia ny hahazo tombony amin'ny hafa fa tsy ny mitady vola amin'ny fanasitranana no hanomezana azy ny natiora.
Ahoana no ahafahan'ny natiora manome olona iray tena maniry ny handray soa ho an'ny hafa, nefa iza no tsy manana fomba hanohanana ny tenany?
Raha milaza fa hanome ny natiora dia tsy midika izany fa handrotsaka vola ao am-pofoany izy na hery tsy hita no hamelona azy na vorona hanome sakafo azy. Misy lafiny tsy hita maso ny natiora, ary misy ny lafiny izay hita. Ny natiora dia manao ny asany marina amin'ny lafiny tsy hita maso amin'ny sehatra misy azy, fa ny valin'ny asany dia miseho eny ambonin'ny tontolo hita maso. Tsy afaka ny ho tonga mpanasitrana ny olona rehetra, fa raha misy iray amin'ny maro no mahatsapa fa manana fahaizana voajanahary izy ary manapa-kevitra fa te hanasitrana ny asan'ny fiainany izy, dia hanao izany ny olona toy izany. Saika izany rehetra izany dia hitany fa tsy hamela azy handany ny fotoanany amin'ny fanasitranana ny volany raha tsy mahazo vola. Raha nanaiky vola izy dia tsy hanaiky azy ny natiora. Tsy hahomby izy tamin'ny fitsapana voalohany. Raha nandà vola izy ary nanokana fotoana hanasitranana araka izay avelan'ny toe-javatra iainany, dia raha tsy nisakana ny fahaizana voajanahary sy ny adidiny ho an'izao tontolo izao sy ny fianakaviany izy dia hahita fa miova tsikelikely ny toerany eo amin'ny fiainana. Miaraka amin'ny faniriana mitohy ny manokana ny fotoanany hiasa ho an'ny olombelona, ​​ny toe-javatra misy azy sy ny fifandraisany amin'ny zanak'olombelona dia hitohy mandra-pahitany ny tenany amin'ny toerana toy izany, ara-bola sy amin'ny fomba hafa, mba hahafahany manome ny fotoanany manontolo amin'ny asany. Saingy, mazava ho azy, raha nanana ny eritreritra tao an-tsainy izy fa ny natiora dia mikasa ny hanome azy ho azy, izany eritreritra izany dia nahatonga azy tsy hahomby amin'ny asany. Ny fahalalana dia tsy maintsy mitombo tsikelikely miaraka amin'ny fivoarany. Toy izany ny zava-misy, izay hita eo amin'ny fiainan'ny minisitry ny natiora maro. Saingy mba hahitana ny fizotry ny natiora amin'ny fampivelarana ny zava-misy dia tsy maintsy afaka miasa miaraka amin'ny natiora ny olona ary mandinika ny fiasa eo ambanin'ny zava-misy.
Moa ve ny mpahay siansa kristianina sy sainy tsy manao tsara raha toa ka manasitrana ny tsy fahombiazan'ny dokotera izy ireo?
Izay mijery ny valiny eo no eo fa tsy mahalala ny fotokevitra tafiditra amin'izany dia hiteny hoe eny, eny. Nefa hoy izahay dia tsia! Satria tsy misy mahavita manisy soa maharitra raha tsy misy ny ratsy ratsy raha toa ka diso ny toerany ary raha tsy fantany ny foto-kevitra tafiditra. Ankoatry ny fanontaniana momba ny vola, saika tsy an-kiato ny fiasa ara-tsaina na ny mpanasitrana hafa amin'ny asany any amin'ny toerana tsy fantatra, ary tsy mahalala ny foto-kevitra tafiditra ao amin'ny sainy ara-tsaina. Ny fahitana ny aretina sasany dia manaporofo fa tsy mahalala ny fiasan'ny saina, ary manaporofo fa tsy mendrika ny hampiasa ny lohateny hoe "siantifika" izay ambaran'izy ireo. Raha afaka maneho izy ireo fa fantatr'izy ireo ny fomba fiasan'ny saina mifandraika amin'ny aretina sasany dia mahafeno fepetra ara-tsaina amin'ny fitsaboana ny hafa izy, na dia mety tsy mendrika ara-tsaina aza.
Inona avy ireo fitakiana ananantsika mikasika ny fepetra ara-tsaina tokony hananan'ny manam-pahaizana ara-tsaina?
Raha mahafeno fepetra ara-tsaina amin'ny fikarakarana ara-tsaina hafa dia tokony hametraka olana ho an'ny tenany na hanana olana sasantsasany izay vitany sy vitany. Tokony ho afaka mijery ny fiasan'ny saina izy amin'ny fizotry ny eritreritra mandritra ny famahana ny olana ary tsy hoe mahita fotsiny ireo fizotran'ny saina ireo raha ny fahitana ny fihetsehan'ny vorona amin'ny sidina feno, na ny hosoratsevan'ny kanvon'ny mpanakanto iray. , na ny famolavolana drafitra nataon’ny mpanao maritrano, fa tokony hahatakatra ihany koa ny fizotrany ara-tsaina izy na dia tsapany sy hahafantatra ny fahatsapan’ny vorona sy ny antonony aza, ary mahatsapa ny fihetseham-pon'ny mpanakanto ary mahalala ny filana ny. ny sariny, ary araho ny eritreritr'ilay mpanao mari-trano ary hainy ny anton'ny famoronana azy. Raha mahay mahavita izany izy dia mahavita mihetsika fatratra ny sainy ny sainy. Saingy izao no zava-misy: Raha afaka mihetsika izy dia tsy hanandrana sitrana amin'ny aretina ara-tsaina izay misy antony ara-batana, ary tsy hanandrana hanasitrana ny aretina ara-batana amin'ny "fikarakarana ny sain'ny hafa" koa izy noho ny antony tsy misy afaka manasitrana ny sain'ny hafa ny iray. Ny saina tsirairay dia tsy maintsy ho dokotera azy manokana raha toa ka miteraka fitsaboana ara-tsaina. Ny zavatra rehetra azony natao dia ny hampahazava ny marina ny toetoetran'ny marary ao an-tsaina ny hafa, ary maneho ny niandohan'ny aretina sy ny fomba mety hamitrana ny fanasitranana azy. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny vava ary tsy mila fikarakarana ara-tsaina na fitadiavana zava-miafina. Fa raha ny marina hita dia mamely eo amin'ny fototry ny Siansa ara-tsaina sy ny Christian Science izy io satria manala ny foto-kevitra roa.
Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ilay olona manaraka ny fisainan'ny mpahay siansa ara-tsaina sy kristiana ary manaraka tsara ny zavatra ataony?
Ny fangatahan'ireo karazana "mpahay siansa" dia amin'ny endrika fandavana sy fanamafisana. Maka ny toeran'ny mpampianatra sy mpanasitrana izy ireo dia manamafy ny fahafahany mampianatra ireo misterin'ny tontolon'ny eritreritra toy ny siansa. Nohamafisin'izy ireo fa tsy misy ny resaka sy ny maha-ambony indrindra ny saina, na mandà ny fisian'ny faharatsiana, ny aretina ary ny fahafatesana izy ireo. Na izany aza dia nametraka ny tenany ho mpitarika ao amin'ny tontolon'ny fizika izy ireo mba hanaporofoana fa tsy misy ny raharaha, tsy misy ny aretina ary tsy misy aretina, tsy misy fahafatesana, aretina izany dia fahadisoana, fahafatesana lainga. Saingy raha tsy misy ny olana, ny aretina ary ny fahadisoana, dia tsy afaka niaina tahaka azy ireo tamin'ny alàlan'izy ireo ny saram-pitsaboana tsy misy, ary tsy afaka nanangana fiangonana sy sekoly lafo vidy izy ireo hampianatra ny tsy fisian'ny aretina, ny olana ary ratsy. Ny anaran'ny siansa, izay nalain'ny mpahay siansa sy nampihatra ireo lalàna voamarina ao ambanin'ny fepetra efa nofaritana mialoha, dia alaivo izy ireo ary avy eo mandà ireo lalàna ireo. Mamitaka ny tenany izy ireo, mamitaka ny hafa ary noho izany dia miaina ao anatin'ny tontolon'ny fitaka noforonin'izy ireo izy ireo. Ny fahaizana mahita ny fandidiana ara-tsaina, manala ny saina tsy hanam-bintana satria maneho ny fihodinan'ny fiantraikany ara-batana amin'ny antony ara-tsaina, toy ny hetsika fankahalana, tahotra, hatezerana, na faniriana. Ny fahitana ny fiasan'ny sain'ny tena manokana no mitondra ny fahaiza-mandinika ny vatan'ny olona iray ho zavatra hafa ankoatry ny saina, ary izany rehetra izany dia manaporofo ny zava-misy isaky ny fiaramanidina fihetsika sy ny asan'ny saina any amin'ny fiaramanidina rehetra. Ny saina izay novolavolaina dia tsy afaka hanaiky ny fangatahan'ireo mpahay siansa ara-tsaina na kristiana satria fantatra fa diso ireo fambara ireo, ary raha ny iray amin'ireo "mpahay siansa azy" dia tokony hahita ny zava-misy amin'ny fiaramanidina tsirairay dia tsy afaka ny hijanona ho " mpahay siansa ”ary miaraka amin'izay ihany koa ny zava-misy.
Inona avy ny vokatry ny fanekena sy ny fampiharana ny fampianaran'ireo mpahay siansa kristiana na saina?
Ny vokatra, mandritra ny fotoana kelikely, toa hita fa mahasoa indrindra amin'ny ankamaroan'ny tranga satria ny fikorontanana noforonina dia vaovao ary ny niainan'ilay filibana dia mety haharitra mandritra ny fotoana iray ary fotoana voafetra ihany. Saingy tsy maintsy misy fihetseham-po avy amin'ny fitaka rehetra, izay hitondra vokatra mampidi-doza. Ny fampianarana sy ny fampiharana ny fotopampianarany dia isan'ireo heloka bevava mahatsiravina indrindra sy mahavita manohitra ny maha-olombelona satria manery ny saina handà ny zava-misy izy ireo satria misy eo amin'ny fiaramanidina avokoa. Ny saina voatsabo dia tsy afaka manavaka ny zava-misy amin'ny haingam-pandeha, ary noho izany dia tsy mahavita milaza ny marina amin'ny fiaramanidina rehetra. Manjary tsy mifantoka, tsy fantatra, ny saina ary mandà na manamafy izay nasaina rehetra ary voasambotra ny fivoarany, dia mety hanjavona izany.
Maninona ireo mpanasitrana ara-tsaina be dia be no manankarena raha tsy misy fanasitranana, ary raha tsy izy ireo no maneho ny tenany, dia tsy hahita ny marina ve ny mpitsabo?
Ny hositranina rehetra dia tsy hosoka. Ny sasany amin'izy ireo dia mino fa manao soa, na dia mety tsy mandinika akaiky loatra ny antony manosika azy ireo aza. Mpanasitrana ara-tsaina mahomby dia manankarena satria izy dia niandany tamin'ny tenany ary tonga mpanompo ny Fanahy lehibe eto an-tany, ary manome valisoa azy ny Fanahy Earth. Ny vokany dia manasitrana izay tsy mahalala ny momba azy ireo na handà ny asany. Fa ny fomba sy ny fomba anaovana ny fanasitranana dia tsy fantatry ny mpitsabo. Ny mpitsabo dia tsy tokony antenaina hisolo tena ny tenany amin'ny hazavana tsy mahafinaritra amin'ny marary iray, fa ny marary rehetra kosa tsy mahita ilay mpitsabo amin'ny hazavana izay tiany ho hitan'izy ireo. Raha mino ny sasany amin'ireo marary izay efa notsaboin'ny mpanasitrana izahay, dia ho hita eo amin'ny hazavana tsy dia tsara izany. Ny iray amin'ireo fanontaniana mipoitra momba ny fitsaboana ny marary dia ny mety holazain'ny mpitsabo tsy manam-pitsipika iray amin'ny marariny rehefa voafehy ara-tsaina ilay marary na farafaharatsiny mba hahazoana ny heviny. Tsy hahagaga raha fantatsika fa misy mpitsabo tsy mahatoky amin'ny asan'ny saina, toy ny isaky ny varotra na asa rehetra. Ny fotoana sy ny fakampanahy atolotra ny lehilahy tsy manam-pahaizana dia lehibe, satria amin'ny sosokevitra ara-tsaina na fifehezana dia raharaha mora ny manohina ny sain'ny marary malala-tanana sy feno fankasitrahana hiziriziry amin'ny faneken'ny mpitsabo vola na fanomezana be dia be, indrindra rehefa mino ny marary fa nahazo tombony izy.
Tsy i Jesosy sy ny maro amin'ireo olo-masina no nanasitrana ny aretina ara-batana tamin'ny fomba ara-tsaina ary raha diso ve izany?
Izany dia voalaza, ary mino izahay fa azo atao sy marina, fa Jesosy sy ny olona masina maro no nanasitrana ny aretina ara-batana tamin'ny alàlan'ny fisainana ary tsy misalasala isika milaza fa tsy ratsy izany, raha fantatr'izy ireo ny ataony. Fantatr'i Jesosy ny zavatra nataony tamin'ny fanasitranana tsy azo inoana, ary maro amin'ireo olo-masina no nanana fahalalana betsaka sy fahasoavana lehibe ho an'ny olombelona, ​​saingy i Jesosy sy ny olo-masina dia tsy nahazo vola mba hahasitrana azy ireo. Rehefa apetraka ireo fanontaniana apetraky ny olona manohana ny asan'ny mpanasitrana dia tsy mijanona mieritreritra an'io tranga io akory izy ireo. Tsy toy ny an'i Jesosy sy ny mpianatr'i Jesosy na ireo olona masina no tokony handoa be isaky ny fitsidihana ny marary tsirairay, na manasitrana na tsy misy fanafody, na mandoa vola dimy heny mihoatra ny zato dolara isaky ny kilasy. , hampianatra ny mpianatra ny fomba fanasitranana. Satria Jesosy nanasitrana aretina maro dia tsy fahazoan-dàlana ho an'ny iray hametraka ny tenany amin'ny asa fanasitranana ara-tsaina. Na iza na iza vonona ny hiaina fiainana toa an'i Jesosy araka izay azony atao, dia hanana zo hanasitrana fa sitrana amin'ny fitiavana ny namany, ary tsy handray valisoa mihitsy. Jesosy nanasitrana tamim-pahalalana. Rehefa nilaza izy hoe "Voavela ny helokao, dia midika fotsiny izany fa nandoa ny helony ny marary. Ny fahafantarana an ’i Jesosy dia nampiasa ny fahalalany sy ny heriny mba hanafaka azy amin’ ny fijaliana bebe kokoa, hany ka niasa nifanaraka taminny lalàna fa tsy hanohitra ny lalàna. Jesosy, na olon-kafa manam-pahalalana dia tsy haneso izay rehetra nanatona azy, fa ireo izay mahasitrana ao anatin'ny lalàna ihany. Izy tenany dia tsy mba teo ambanin'ny lalàna. Nihoatra noho ny lalàna izy; ary raha ambonin'io izy dia nahita izay rehetra tonga ambanin'ny lalàna ary nijaly taminy. Afaka manamaivana ny aretin-tsaina, ara-pitondran-tena na ara-tsaina izy. Ny fahatsapan-tena momba ny fitondran-tena dia nositraniny rehefa niaritra ny fijaliana ilaina izy ireo mba hahitan'izy ireo ny tsy mety nataony ary rehefa tena te-hanao tsaratsara kokoa izy ireo. Ireo izay nateraky ny olana ara-tsaina dia mety ho sitrana raha tsy ekena ny fangatahana natiora ara-batana, rehefa niova ny fahazarana ara-pitondran-tena ary rehefa vonona ny handray ny andraikiny manokana sy manatanteraka ny andraikiny manokana izy ireo. Rehefa tonga tany amin'i Jesosy ireo dia nampiasa ny fahalalany sy ny heriny hanafaka azy ireo amin'ny fanaintainana bebe kokoa satria nandoa trosa natiora izy ireo, nibebaka tamin'ny asa ratsy nataony, ary tao amin'ny toetrany anatiny dia nanaiky ny handray sy hanatanteraka ny andraikiny izy ireo. Rehefa avy nanasitrana azy ireo izy dia nilaza hoe: "Mandehana, ary aza manota intsony."
Raha diso ny fahazoana vola hahazoana ny fikorontanana ny aretina ara-batana amin'ny alàlan'ny fizahana ara-tsaina, na amin'ny fanomezana ny 'fampianarana siansa', tsy mety ve ny mpampianatra sekoly mandray vola amin'ny fampianarana ny mpianatra any amin'ny sampana fianarana?
Tsy misy firy ny fifanarahana eo amin'ny mpampianatra na ny mpanasitrana ny siansa ara-tsaina na Christian ary ny mpampianatra any amin'ireo sekolin'ny fianarana. Ny teboka iray izay itovizany ihany dia ny fampianaran'izy roa ireo mifandraika amin'ny sain'ny marary na ny zanany. Raha tsy izany dia tsy mitovy ny fitakiany, ny tanjony, ny fomba fiasa ary ny valiny. Ny mpianatry ny sekoly dia nianatra fa misy isa manana lanja manokana ny tarehimarika; fa ny fitomboan'ny tarehimarika sasany dia manana vokatra mitovy hatrany, ary na oviana na oviana, ny mpampianatra dia nilaza tamin'ny mpianatra iray fa in-telo isam-bolana, na roa fa manao roa ambin'ny folo roa. Vantany vao mianatra mitombo ny mpianatra dia afaka manaporofo foana ny marina na ny diso ny fanambaràn'ny iray hafa amin'ny fitomboan'ny isa. Na izany na tsy izany, ny mpanasitrana dia afaka mampianatra ny marary-ny mpianatra amin'ny zavatra rehetra toy ny fahitsiana. Ny manam-pahaizana dia mianatra ny fitsipi-pitenenana sy ny matematika ho an'ny antony sy ny fampilovana ny filaharana marina sy ny fanehoana mora ny heviny amin'ny hafa izay manan-tsaina. Ny mpanasitrana ara-tsaina na ny mpahay siansa kristiana dia tsy mampianatra ny mpianatra amin'ny alàlan'ny fitsipika na ohatra mba hanaporofoana na hanaratsiana ny filazan'ny hafa, na handamina ny heviny ary haneho azy ireo amin'ny fomba tsy takatry ny hafa amin'ny tsy finoany, na hamela izany. ny zavatra inoany sy ny teniny fa miaro ny fahamendrehany. Ny sekolin'ny fianarana dia misy mba hanampiana ny mpianatra hahatakatra ny zava-misy amin'ny fiaramanidina izay misy azy, mba ho olona ilaina ary ho manam-pahaizana amin'ny fiaraha-monina. Ny mpanasitrana "siantifika" dia tsy manaporofo na mampiseho ny fitenin'ny "mpahay siansa" hafa amin'ny alàlan'ny fombany, ary ny mpianatry ny mpanasitrana kosa dia manaporofo ny maha marina ny fangatahan'ny mpampianatra azy na ny mpampianatra iray hafa. fa ny mpianatry ny sekoly dia afaka ary manaporofo izay nianarany fa marina na diso. Ny mpampianatra ny sekoly dia tsy mody mampianatra ny fanasitranana ny aretina ara-batana amin'ny alàlan'ny fomba ara-tsaina, fa ny "siantifika" kosa, ary noho izany dia tsy mitovy amin'ny mpampianatra any amin'ireo sekoly. Ny mpampianatra any an-tsekoly dia manofana ny sain'ny mpianatra hahalala ny zavatra hita amin'ny saina, ary mahazo ny karamany izy, izay porofon'ny fahatsapana; fa ny mpahay siansa ara-tsaina na kristiana dia mampiofana ny sain'ny mpianakaviny manam-paharetana hanohitra, handavana ary tsy mino ireo zava-misy izay hita amin'ny fahatsapana, ary mandritra ny fotoana iray dia mamoaka ny karamany amin'ny vola, ary arakaraka ny porofon'ny fahatsapana. Ka toa hita fa tsy misy ny tsy mety any amin'ny mpampianatra sekoly mandray vola toy ny fandoavana ny tolotra nataony araky ny fiaramanidina izay iainany sy mampianatra; kanefa tsy mety raha mpahay siansa ara-tsaina na mpahay siansa kristiana ny milaza ho manasitrana na mampianatra manohitra ny porofon'ny fahatsapan-tsaina ary mandritra izany fotoana izany dia maka na mandray karama araka ny fijeriny izay nolaviny, nefa izay tiany kosa. Fa hevero fa tsy mety ho an'ny mpampianatra sekoly ny mandray vola amin'ny asany.